Otu esi egbochi ntutu ntutu na ndụmọdụ iji chịkwaa usoro ụlọ - Ngwọta Homelọ
Nddị Nri Ngwaahịa Gynaec Jụọ Ọkachamara Nke Nrụgide Techaa Ahụike Ngwa Dị
Ngwọta Homelọ Iji Kwụsị Fall Fall
A na-ezo aka na 'okpueze nke okpueze', tress bụ ngosipụta nke njirimara na ụdị mmadụ. Oké ntutu isi nwere ike ịbụ nsogbu na-eweta nsogbu, na-ewetakarị nchekasị ma na-emetụta ùgwù onwe onye, ​​ọkachasị maka ụmụ nwanyị. Otú ọ dị, ọ bụrụ na a chọpụta ya nke ọma, ịnwere ike ịchịkwa ntutu ịda na ụfọdụ ọgwụgwọ ụlọ nke sitere n'okike ma dị irè n'ịchekwa mkpọchi gị.
1. Ihe ndị na-akpata ntutu isi
abụọ. Ndụmọdụ maka ịchịkwa ntutu ntutu
3. Ngwọta anụ ọhịa iji mesoo Fall ntutu
Anọ. Nri Maka Healthy Hair
5. Atụmatụ nlekọta ntutu maka ahụike akpọchi
6. Ajụjụ na ntutu isi
Ihe ndị na-akpata ntutu isi
1. Mmezi erimeri
O nwere ike ịbụ na nri dị mkpa nwere ike na-efu na nri gị dịka iron, ọla kọpa, zinc na protein. Erughi vitamin D bụ ihe ọzọ na-akpata ntutu isi. Iji zere nke a, gbaa mbọ hụ na ịpụ ma banye ụfọdụ mmiri.
2. Hormonal Etisa
Mgbe afọ 30 gasịrị, ụmụ nwanyị nwere ike ịnwe ezighi ezi nke hormonal nke nwere ike ibute ntutu isi. Nke a na - akpatakarị mgbanwe ntụgharị dihydrotestosterone (DHT) oke. Ọ bụ ezie na estrogen bụ hormone bụ isi nke ụmụ nwanyị na-emepụta, testosterone na ndị ọzọ androgens dị ka DHEA na-emekwa n'ahụ nwanyị. Ka ụmụ nwanyị ruru afọ ole ha dị, ha nwere ike ịmalite ịtụgharị androgens ndị a na DHT.
3. nsogbu thyroid
Ọ bụrụ na thyroid gland, nke dị n'ihu olu, na-emepụta oke ma ọ bụ ezughi oke nke hormone thyroid, mgbe ahụ ntutu uto ntutu nwere ike ịgbanwe. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị nwere nsogbu nke thyroid, ị ga-ahụ mgbaàmà ndị ọzọ yana ntutu isi dị ka uru ma ọ bụ ọnwụ, nnabata uche na oyi ma ọ bụ okpomọkụ, na mgbanwe nke obi
Withmụ nwanyị nwere ọrịa polycystic ovary (PCOS) nwere nsogbu hormonal nke na --emepụta ọkwa dị elu nke androgens karịa ka ọ dị. Nke a na-emekarị ka ntutu na-eto na ihu na ahụ, ebe ntutu dị n'isi na-eto eto. PCOS nwekwara ike iduga nsogbu nke ovulation, otutu, na ibu ibu.
5. Ọgwụ mgbochi ọmụmụ
Ngwunye ọgwụ ọmụmụ nwere ike ime ka ntutu ghara ịgwụ. Mkpụrụ homonụ dị na pill nke na-egbochi ovulation nwere ike ime ka ntutu dị gịrịgịrị, ọkachasị na ụmụ nwanyị nwere akụkọ ihe mere eme nke ezinụlọ nke ntutu isi. Mgbe ụfọdụ ntutu isi nwere ike ime mgbe ịkwụsị ị stopụ ọgwụ. Ọgwụ ndị ọzọ metụtara ntutu isi bụ ihe na-eme ka ọbara dị elu na ọgwụ na-agwọ ọbara mgbali elu, ọrịa obi, ogbu na nkwonkwo, na ịda mba.
Oké nrụgide nwere ike ịkpata ntutu ntutu na mberede nke nwere ike ịdịru ọtụtụ ọnwa. Na-ebelata nrụgide site na mmega ahụ, ntụgharị uche yoga na ịhịa aka n'ahụ ga-ebelata ohere ịnweta ntutu gị.
7. Ngwa ntutu
Isi edozi isi nwere ike ibute ntutu n'ihi ntutu kemikal dị na agba na ngwaahịa. N'otu aka ahụ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na shampoo niile dị na Sodium lauryl sulfate (SLS) nke nwere nsị na-emetụta usoro mgbochi gị, egosila na ọ na-emebi ntutu isi ma gbochie uto ntutu. Ọ bụ ihe amamihe dị na ịrapara na shampoos na dyes.
8. Ọnọdụ Ahụike
- Telogen ikuku
izugbe zuru ezu site na isi niile. Anyị na-efukarị ụfọdụ ntutu isi 100 kwa ụbọchị mana mgbe ụfọdụ ịwụfu ngwangwa n'ihi nrụgide, ọrịa, ọgwụ ma ọ bụ homonụ. Ntutu isi na-eto eto n’ime ọnwa isii.
na ụmụ nwanyị, ntutu na-adịkarị agbago n'elu, mpaghara ihu, dị n'azụ ntutu isi, mana na-anọkarị na azụ. Otu enzyme na-eme ka ntụgharị nwoke na nwoke na nwoke na nwanyị na-enwe testosterone na hormone ọzọ, dihydrotestosterone (DHT), na-eme ka eriri ntutu ahụ mepụta ntutu dị gịrịgịrị ruo mgbe ha kwụsịrị.
ọrịa autoimmune nke na-emetụta ihe ruru 2% nke ndị bi na ya. Ọ na - ebute ndalata ntutu isi ma na - ebute ịkpụcha ntutu. N'ọtụtụ ọnọdụ, ntutu na-adaghachi azụ.
- Agka nká
Ka anyị n’agadi, etu ntutu isi anyị si eto na-ebelata. Isi ntutu na-adị obere ma nwechakwa ụcha, ntutu isi na-adị gịrịgịrị, na-ama mma, na-acha ntụ ntụ. Iji mee ka ntutu gị dị mma, rie nri niile na-enyere gị aka ime ka ahụ gị ntorobịa, yana ntutu gị. Ọ bụrụ na ị nwere akacha ntutu , i nwere ike ịchọta ebe a ihe mgbakwunye ndị nwere ike inyere gị aka.
A na-akpọ ntutu isi nke mkpụrụ ndụ ihe nketa dị ka androgenetic alopecia ma mara na ọ bụ ihe kachasị akpata ntutu. Enwere ike iketa ihe ọmụmụ site na nne ma ọ bụ nna nke ezinụlọ, n'agbanyeghị na ị nwere ike ịnwe ya ma ọ bụrụ na nne na nna gị nwere ntutu isi.
Ndụmọdụ maka ịchịkwa ntutu ntutu
1. ncha ntutu
Ọ dị oke mkpa ịghọta ụdị ntutu gị ma họrọ ncha ntutu kwesịrị ekwesị. Ọzọkwa, ịkwesịrị ịsacha ntutu gị dabere na isi gị. Iji maa atụ, ịsacha ntutu isi na akọrọ isi nwere ike iduga na ntutu isi, ma ọ bụ na ịsaghị mkpọchi mmanu ugboro atọ n'izu nwere ike iduga otu ihe ahụ.
Ọzọkwa, gbaa mbọ hụ na anaghị eji kemịkalụ ejiri shampoo gụnyere sulfate, paraben na silicone nke nwere ike ime ka mgbatị gị dị nro na yabụ nwere ike imebi.
A ezi conditioner nwere ike na-arụ ọrụ ebube gị ji akpọchi. O nwere amino acid nke n’enye aka imezi ntutu mebiri emebi, ma na enye aka ime ka ha di nma.
3. Nri na Mmega
Ikwesiri iri nri ntutu gị niile nri na-edozi ahụ karịsịa ọtụtụ protein na ígwè. Otú ọ dị, tinyere iri a edozi nri hụ na ị na-emega ahụ n'akụkụ. Yoga na ntụgharị uche dị irè na mbenata ọdịda ntutu.
4. Chemical Ọgwụ
Goingga ọgwụgwọ na-agbanwe agbanwe nke ntutu dị ka ịgbatị, ịmịcha agba ya adịghị amasị gị. Ọzọkwa zere iji kpoo ọkpọ oku , curling mkpara, karịsịa na mmiri ntutu dị ka ha n'ezie esi mmiri na ntutu gị aro na-eme ka ha kenkuwa.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ iji otu ọkpọ ọkpọ, mgbe ahụ debe ya na ọnọdụ okpomọkụ kachasị dị ala. Ọ bụrụ na ị na-eji ngwaahịa ndị ọzọ na-eme ka ntutu gị dị ọkụ, bido site na ihe mkpuchi ume na-ahapụ ma na-emecha ihe ịgba ọkụ.
5. Ikwupụta mmanụ
Oiling mma mgbasa ọbara ma na-edozi mgbọrọgwụ. Jide n'aka na ịhịa aka na nkedo otu ugboro n'izu na mmanụ ga-adaba gị. Kpuchie ya na okpu eji asa mmiri ma sachaa ya site na ncha ntutu di obere ka awa abuo gasiri.
6. Ọtụtụ styling ngwaahịa
Iji ọtụtụ ngwaahịa ọgwụ buru ibu na ntutu gị nwere ike bụrụ nke ga-emerụ ahụ ogologo oge. Ọ kachasị mma inye ha ezumike ma gbalịa iji aka gị mee usoro nri sitere n'ụlọ.
Ngwọta anụ ọhịa iji mesoo Fall ntutu
1. akwa nkpuchi
Àkwá bara ụba na sọlfọ, phosphorous, selenium, ayodiin, zinc na protein, nke jikọtara aka na-akwalite uto ntutu .
Iji kwadebe nkpuchi:
Kewapụ otu akwa ọcha na nnukwu efere ma tinye teaspoon nke ọ bụla mmanụ oliv na mmanụ a honeyụ.
Iti ka ime mado wee tinye ya niile site na mgbọrọgwụ gaa na ndụmọdụ.
Mgbe minit 20, itucha na nwayọọ ncha ntutu.
2. Osisi Licorice
Ogwu a na-egbochi ntutu isi na mmebi ọzọ na ntutu. Ọ na - enyere aka mee ka akpụkpọ ahụ daa ma kpochapụ flakes / dandruff ọ bụla kpọrọ nkụ.
Mee pasta site na ịgbakwunye otu ngaji nke mgbọrọgwụ mmanya liquorice na otu ụzọ ngafe nke teaspoon saffron na otu iko mmiri ara ehi.
Tinye nke a na ntutu gị na ogologo ntutu gị ma hapụ ya n'abalị.
N’ụtụtụ echi, sachaa ntutu gị.
Tinyegharịa a ugboro abụọ n'izu.
3. Aki oyibo
Mkpụrụ protein na abụba ndị dị mkpa dị na ya na-akwalite ntutu isi ma gbochie ntutu isi.
Iji kwadebe mmiri ara ehi:
Ghee oyibo oyibo buru ibu ma gbanye ya n'ime ite maka nkeji ise.
Nje ma dị jụụ.
Ekem tinye otu ngaji nke ọ bụla n'ime mkpụrụ ojii a na-egbu mmiri na mkpụrụ fenugreek na mmiri ara ehi.
Tinye na ntutu gị na ntutu gị.
Mgbe minit 20, sachaa ya na ncha ntutu.
4. Green tii
Nke a na tii bara ọgaranya na antioxidants, nke na-enyere aka ịkwalite uto ntutu ma gbochie ntutu isi.
Tinye tii abụọ na atọ n’ime iko iko mmiri ọkụ abụọ na-adabere n’ogologo ntutu gị.
Mgbe ọ jụrụ, wunye nke a n'isi gị na ntutu gị, ma jiri nwayọ na ịhịa aka n'isi gị.
Itucha na mmiri oyi mgbe otu awa gasịrị.
5. Ihe ọiceụ Juụ Beetroot
Beetroot bara ọgaranya na vitamin C na B6, folate, manganese, betaine na potassium, ha niile dị mkpa maka ntutu ntutu dị mma. E wezụga nke ahụ, ọ na-arụ ọrụ dị ka onye na-egbu egbu site na inye aka mee ka isi dị ọcha.
Sie akwukwo akwukwo beetroot 7-8 ma ghee ya na akwukwo henna 5-6.
Tinye ihe mgbochi a n'isi gị ma hapụ maka oge 15-20 tupu ị jiri mmiri ọkụ.
6. Greek Yoghurt na Mmanụ aeyụ
Gwakọta ngaji yogọt abụọ na ngaji mmanụ a andụ na lemon n’ime nnukwu efere.
Iji ahịhịa e ji esiji ákwà, tinye pasta a n’isi ala na mgbọrọgwụ.
Hapụ ya ka ọ dị nkeji iri atọ tupu i jiri mmiri oyi sachaa.
Tinye pasta a otu ugboro n'izu.
Aloe Vera bụ ọgwụgwọ ụlọ dị irè maka ntutu isi na ịkwalite uto ntutu. Ọ dịkwa irè na mbenata nsogbu nke ahịa ala isi dị ka itching na flaking.
Were osisi Aloe Vera ma wepu pulp.
Tinye ya na ntutu gị na ntutu gị ma hapụ ya ihe dị ka nkeji iri anọ na ise.
Itucha na nkịtị mmiri. I nwere ike ime nke a ugboro ato ma ọ bụ anọ n’izu ka ị hụ nsonaazụ kacha mma.
8. Fenugreek Mkpụrụ
Fenugreek ma ọ bụ mkpụrụ Methi bụ otu n'ime ọgwụgwọ kachasị dị irè iji kwụsị ntutu isi. Ọ na-edozi ntutu isi ma na-enyere aka na ntutu isi.
Ghaa mkpụrụ osisi fenugreek n’abalị na mmiri.
Gri ya na pasta dị mma ma tinye ya na ntutu isi gị.
Hapụ mado ahụ n'isi gị ihe dị ka nkeji 30.
Nwere ike iji okpu mkpuchi gị kpuchie isi gị iji mee ka ọ dị mmiri mmiri.
Mgbe minit 30 ruo 40, jiri mmiri nkịtị sachaa ya.
Ikwesighi iji shampoo ọ bụla.
Mee ya ugboro abụọ n’izu maka otu ọnwa iji chịkwaa ọdịda ntutu.
9. Yabasị Ihe ọiceụ .ụ
Njirimara antibacterial nke eyịm na-enyere aka ịlụ ọgụ megide ọrịa ntutu isi, ebe sọlfọ ahụ na-eme ka mgbasa ọbara na-erugharị na ntutu nke ntutu. Ọ na-akwalite uto ntutu ma na-achịkwa ọnwụ nke ntutu.
Iji wepụ ihe ọ juiceụ juiceụ yabasị , ghaa ofe na mịpịa ihe ọ juiceụ juiceụ ahụ.
Rinye ogho owu n’ime mmiri yabasị ma tinye ya n’isi.
Hapụ ya maka nkeji iri abụọ rue iri atọ ma sachaa ya site na iji mmiri nkịtị na ncha ntutu dị nro.
Soro usoro a otu ugboro n'izu wee hụ ihe dị iche.
Indian goozberị ma ọ bụ Amla bụ ọgwụgwọ ọzọ dị irè iji kwụsị ntutu isi. Otu ihe kpatara ya bụ ụkọ vitamin C, yabụ iri amla ga - eme ka ntutu dị ike ma nyere gị aka ijikwa ya. Ekele ya na mgbochi mkpali na ikpochapu ya, enyemaka amla na-akwalite uto ngwa ngwa nke ntutu, na-edozi ahụ ike ma na-egbochi isi awọ.
1You nwere ike ijikọta ihe ọ juiceụ juiceụ lime na ntụ amla iji kpoo.
Hịa aka na ntutu gị na ntutu gị.
Jiri okpu mmiri iji kpuchie isi gi ka ihe nkedo ghara ihicha.
Debe ya ruo otu awa wee sachaa ya na mmiri nkịtị.
Nri Maka Healthy Hair
Ọ bụ ezie na ọgwụgwọ na shampoos na-ekere òkè na ịnọgide na-enwe ntutu dị mma, ihe nzuzo nke akwa, na-egbuke egbuke, nke siri ike bụ nri dị mma.
1. Akwụkwọ nri
Eriri ígwè bụ isi ihe kpatara ntutu daa. Nri abụghị naanị isi iyi ígwè kamakwa vitamin A, C na protein. O nwekwara sebum nke na - eme ka ihe na - eme ntutu ma nye anyị omega-3 acid, magnesium, potassium na calcium. Ndị a na-enyere aka ịnọgide na-enwe ntutu dị mma na ntutu na-egbu egbu.
A maara na ọ dị mma maka anya, carrots nwere vitamin A nke na-emekwa ka uto ntutu dịkwuo mma. Enweghi vitamin A nwere ike ibute akọrọ ma itchy ahịa ala isi . A maara karọt na-agbakwunye na ọkpụrụkpụ nke ntutu, na-eme ka ntutu na-egbu mara mma, na-eme ka mgbasa ọbara dịkwuo elu, na-eme ka ntutu dị ike, na-echebe ntutu site na mbibi mpụga dị ka mmetọ ma na-enye aka igbochi nkwụsị nke ntutu na ntutu.
Ebe ọ bụ na ntutu dị pasent 68 nke protein keratin, àkwá na-enye aka iwughachi ntutu nke mebiri emebi. Ha dịkwa ọgaranya na vitamin B a na-akpọ biotin nke na-enyere ntutu aka itolite.
Oats bara ọgaranya na fiber, zinc, iron, omega-6 fatty acids na polyunsaturated fatty acids (PUFAs) nke na-eme ka ntutu na-eto eto ga-emekwa ka ntutu gị sie ike ma dịkwa mma.
Walnuts nwere biotin, B vitamin (B1, B6 na B9), Vitamin E, ọtụtụ protein na magnesium - ha niile na-ewusi ọnya ntutu ma na-edozi isi. Ọ na - enyere aka igbochi sel gị site na mmebi DNA nke enwere ike ibute site na ikpughe anyanwụ.
Lentils bụ nnukwu ihe na-enye protein, iron, zinc, na biotin. A na-ejikwa folic acid jupụta ha nke dị mkpa iji weghachite ahụike nke mkpụrụ ndụ ọbara uhie na-enye akpụkpọ ahụ na isi ya oxygen dị oke mkpa.
Nri anụ ahụ dị ka ọkụkọ ma ọ bụ toloto nwere ọgaranya na protein dị mma nke na-ewusi ntutu na-emebi emebi ma gbochie mmebi.
8. Strawberries na Guavas
Strawberries nwere nnukwu silica. Silica bụ ihe ịnweta dị mkpa maka ike ntutu na uto ntutu. Ihe oriri ndị ọzọ bara ụba na silica gụnyere osikapa, ọka oat, yabasị, kabeeji, kukumba na kọlịflawa. Vitamin C na-egbochi ntutu isi ịbido ihe na ịgbaji. Ọ bụ ezie na anyị na-echekarị oroma dị ka isi iyi kachasị mma nke vitamin C, otu guava na-ebu okpukpu anọ ruo ise karịa.
Yogọt jupụtara na Vitamin B5 na Vitamin D nke amaara iji kwalite ahụ ike ntutu.
10. Pottọ Nduku
Beta carotene na-echebe site na akọrọ, ntutu na-adịghị mma ma na-akpali glands dị n’isi gị ime mmiri mmanụ a na-akpọ sebum. Mkpụrụ osisi na-acha oroma dị ka karọt, ugu, kantali, mango na poteto dị ụtọ bụ isi iyi nke a.
Atụmatụ nlekọta ntutu maka ahụike akpọchi
1. Mgbe nile Kporo
Ntutu na-abụ ihe kacha mebie n'akụkụ ndụmọdụ ahụ, yana ezigbo mkpụbe ọ bụla izu isii ruo asatọ nwere ike inye aka dozie nsogbu gị. Isi ntutu mebiri emebi nwere ahịhịa dị ka ahịhịa, enwere ike igbutu ya iji kwalite uto ma wepu ya gbawara n'etiti .
Nchegbu bụ otu n'ime ihe na-akpata ọtụtụ nsogbu ahụike, gụnyere ntutu isi. O nwekwara ike imebi usoro nke ntutu isi ma dugara n'isi awọ. Ọzọ, ntụgharị uche na yoga mgbe niile nwere ike ịbụ ezigbo nrụgide.
3. Zere akingakingụ Wụ Ọkụ
Dị ka nkasi obi dị ka mmiri ọkụ na-ekpo ọkụ, ọ na-eme ka eriri (dị ka anụ ahụ), na-ehichapụ ntutu isi nke mmanụ ya, na-eduga na nkụ, ntutu na-agba agba nke nwere ike ịdaba. Kama nke ahụ, họrọ maka mmiri keara andara ma gbalịa ihicha ntutu site na ọnọdụ kachasị mma.
4. Combing Wet ntutu
Eriri ndi anyi adighi emebi emebi ma nwekwaa ike iba mgbe mmiri di. N'ihi ya, ọ dị mkpa iji mkpịsị ụkwụ buru ibu ma ọ bụ hapụ ha ikuku-akọrọ mbụ tupu ụdị ọ bụla nke styling.
5. aringgba ajị edozi isi
Iwepu ntutu gị nke ọma site na mgbọrọgwụ na-akpata mmebi ma yabụ, kwesiri izere ya. Ọ dịkwa mma ka ị ghara ijidesi ntutu isi gị ike mgbe ị na-ehi ụra.
Ajụjụ na ntutu isi
Q. Ntutu ntutu m dị oke njọ, gịnị ka m ga-eme?
.B.. Ọ kachasị mma ileta ọkachamara na akpụkpọ anụ ma ọ bụ trichologist n'okwu banyere ụdị ntutu isi ọ bụla. Onye ọkachamara nwere ike inye gị ụdị nduzi gbasara nke a.
Q. Enwere ike iweghasị alopecia?
.B.. Ka ọ dị ugbu a, enweghị ọgwụgwọ maka alopecia areata. Agbanyeghị, iji ụdị ọgwụ kwesịrị ekwesị na ibi ndụ dị mma, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ohere 80% nke ntutu gị na-eto n'ime afọ na-esote.
Q. Ahịhịa ntutu isi ọ dị mma ma ọ bụrụ na agba agba agba?
.B.. Inwe ihe okike nke ntutu isi Mgbanwe ntutu abụghị ihe na-eme n'otu ntabi anya. Ọ na-ewe ọnwa isii ka mgbọrọgwụ were. Tinyere nke a, enwere nsogbu ndị metụtara oge mgbake. Ọ kachasị mma ịkpọtụrụ trichologist gbasara nke a dịka naanị mgbe nyochachara zuru ezu ị nwere ike ịghọta ma usoro a chọrọ ma ọ bụ na ọ bụghị.
I nwekwara ike ịgụ na mfe & irè ntutu daa ọgwụgwọ .
Categories Olee Otú Iji Techaa Ngwa
obere kalori pasta Ezi ntụziaka
ụdị asana na yoga
ubi kacha mma n'ụwa
ndụmọdụ mara mma maka anụ ọkụ na-enwu n'ụlọ
isi ịchafụ maka ụmụ nwanyị
otu esi ejikwa ntutu daa